Fiainam-bahoaka… mba aoka tsy hohadinoina | NewsMada
Fiainam-bahoaka… mba aoka tsy hohadinoina
Par Taratra sur 05/11/2021
Ho amin’ny tombontsoam-bahoaka ny fanorenana fotodrafitrasa etsy sy eroa: hopitaly manara-penitra, sekoly manara-penitra, tsena manara-penitra, kianja manara-penitra… Marina sa tsy marina? Tsy vitan’izany, hampidi-bola ho ankolaka na mivantana ho azy koa izany. Ekena sa tsy ekena? Na izany aza, toa mitombo manaraka ny fitombon’ireny fotodrafitrasa aorina ireny koa ny fitsikerana ny amin’ny hoe tsy fitsinjovana ny lafiny sosialy na ny fiainam-bahoaka.
Ny rehetra ve, hono, ohatra, no misitraka sy mahita tombontsoa ho amin’ny fihatsaran’ny fiainana andavanandro amin’ireny fotodrafitrasa etsy sy eroa ireny? Na mampidi-bola mivantana izany, na nampihena ahay ny vidim-piainana… Izay fiatrehana ny fiainana andavanandro izay no hoe tena manahirana ny ankamaroan’ny olona amin’izao: sakafo, hofan-trano, fanafody… Misy politika mazava ve izay mba hahazoan’ny vahoaka miatrika izany? Na tetikasa ahay…
Tsy lavina, misy, hono, araka ny fijerin’ny sasany ihany, ny hoe karazana tolo-tanana na fanampiana manoloana ny fahasahiranana mianjady amin’ny vahoaka isan’andro. Saingy tsy mahasehaka ny rehetra, ohatra. Misy ny distrika na kaominina hadino na tavela aza amin’izay lafiny izay? Nefa tsy misy tsy sahirana amin’izao, samy tratran’ny dona sy mitondra faisana noho ny ady tamin’ny fihanaky ny Covid-19. Ny rehetra no hoe tokony hisitraka fanampiana araka ny sehatra misy azy?
Inona koa? Vava tsy ambin’ny mpanohitra sasany ireny karazana fomba fijery amin’ny honohono ireny. Manginy fotsiny ny famendrofendroana efa ho lava hoe mijaly ny vahoaka, tsy afa-mamokatra ny vahoaka, maty ny vahoaka… Nefa ny vahoaka aza tsy mihetsika sy mitabataba lava amin’izay mahazo azy. Tena vizana ka tsy mahaloa-peo sy tsy mahahetsika? Na mahalala sy mahita izay (h)ataony, tsy mikorontana na mitady izany amin’izao misy sy iainana izao…